Zonke yesifunda wadlula ukuhlolwa eqine, operation isipiliyoni okushisa ezisukela - 60 ° C kuze kube +60 ° C test, izinga lokushisa ngebhayisikili test, ukuguga test, ukugqwala ukumelana yokuhlola njll
Ukuze ukufakwa onikhiphele zasemoyeni iconsi wire amakhebula igobolondo ngocingo sika. Beka ingxenye ukungezwani ngocingo phezu fibre optical noma ikhebula yocingo nge embossing ephakanyiswe, ngokumelene ikhebula. Faka nhlonhlo e igobolondo. Fakela wire sebheyili iconsi wire hook fixate e igobolondo.
Izinto: insimbi engagqwali noma umzimba kanye wire ibheyili aluminium iconsi wire ngocingo sika
Beka wire okubambelela izibopho ingafakwa efile ekupheleni, kabili efile-ophela inethiwekhi yentambo imizila.
Fibre optic iconsi ikhebula izibopho design ivumela ukumelana umthwalo esanele ngaphandle ikhebula ukushelela kanye umonakalo.
Insimbi izinto steel isiqinisekiso isikhathi eside ukusetshenziswa. Okugcwele engagqwali noma plastic ukuqondiswa ayatholakala.
As FTTH clamp factory Jera is able to produce this ODWAC,ezokuxhumana ngocingo kusuka metal kanye ne-aluminium, ngesicelo ikhasimende. Siphinde sibe afanele ODWAC, FTTH isigxobo izesekeli.
Olandelayo: FTTH Drop Clamp, S-Type/ P-clamp
Drop Wire Ngocingo
udedele wire izibopho